Wasiir Sacad oo Ka Hadlay Kharashka Ku Baxaya Jidka Berbera Corridor Iyo Dawladda La Filayo Inay Maalgaliso | Baligubadlemedia.com
Wasiir Sacad oo Ka Hadlay Kharashka Ku Baxaya Jidka Berbera Corridor Iyo Dawladda La Filayo Inay Maalgaliso
October 25, 2018 - Written by admin
Wasiirka arrimaha dibadda Somaliland Dr. Sacad Cali Shire, ayaa rajo wanaagsan ka muujiyay in la bilaabo dhismaha jidka isku xidhaya Berbera iyo Wajaale oo muhiim u ah dekedda Berbera.
Wasiir Sacad, oo u waramay wargesyska The reporter ee ka soo baxa Addis Ababa, wuxuu sheegay in ilaa hadda lacagta ku baxaysa dhismaha jidkaas oo dhan 90 milyan oo dollar ay bixinayso dawladda UAE, laakiin uu rajo ka qabo in Midowga Yurub iyo Ingiriisku ka qayb galaan. Wasiirka oo la weydiiyay inuu ka waramo halka uu dhismaha jidkaas ee Berbera iyo Wajaale marayo ayaa yidhi “Jidka isku xidha Berbera iyo Wajaale waa la horumarinayaa. Imikaba, shirkad ayaa loo xushay inay ka shaqayso nashaqada. Way gabagebeeyeen xog ururinta qaabka jidka. Marka taas la dhammaystiro qandaraaska dhismaha jidka ayaa la baahinayaa.”